7 Izindlela Zigcine Unempilo Enhle Nakuba Okuhambayo | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Izindlela Zigcine Unempilo Enhle Nakuba Okuhambayo
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 02/06/2020)
Nge wamanje Ukugqashuka coronavirus Uphonsa kumacebo wonke umuntu ku-zibangelwa, kungaba nzima ukwazi ukuthi kufanele ukugcina uhambo lwakho ngesikhathi coronavirus noma cha. Nakuba singeke senze leso sinqumo ngawe uma ukhetha ukuqhubeka ku kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uthatha izinyathelo zokuvikela impilo yakho. Ukuze kufezwe lokho, nazi 7 ngamathiphu okuhamba ukuze kukusize futhi ukuth uhlale ngenkathi wokujikeleza enempilo.
Zigcine Unempilo Enhle Nakuba Okuhambayo Inombolo 1: Geza Izandla Zenu
Lokhu omunye kungase kubacacele, kodwa izandla ingenye yezindlela ezingcono kakhulu ukuze uzigcine enempilo. Kungani? Ngokwe Izikhungo Wezempilo Kazwelonke, “Ukugeza izandla zakho kususa kahle ukungcola, amagciwane, namagciwane ukubavimba esakaza kwezinye yabantu neyezinye izinto, okuyinto ungasabalalisa izifo ezifana ukudla okunobuthi, umkhuhlane noma isifo sohudo. Kungasiza stop abantu abavela ngiphakamisa izifo, bawendlala kwabanye”.
Ngamafuphi nje, izandla kuqeda yonke gook wena buthelela usuku lonke. Lokhu ikakhulukazi sisebenza abahambi. Izivakashi amasayithi agcwele isixuku esikhulu sabantu abavela emhlabeni jikelele. Uma kubantu abayinkulungwane ngosuku kuthiwa ngokuthinta nensimbi yomnyango olulodwa, futhi nje engazange wageza izandla zakhe, ucabanga ukuthi angcolile kumele kube!
Uma ungumuntu endaweni ngaphandle ukugijima amanzi anele noma insipho, uzophinda kudingeka uqiniseke ukuthi wathenga futhi wasebenzisa olunoketshezi lokuhlanza izandla njalo. Nakuba lokhu kungaba Ewufrathe izandla zakho uma lisetshenziswa ngokweqile, kukhona izinguqulo olunoketshezi lokuhlanza izandla ezifaka izingxenye amafutha ukuze ube ngezandla ezihlanzekile futhi isikhumba sakhe esithambile.
It eside kwaziwa ukuthi akozeli ngokwanele Uphatha kabi izivikeli mzimba. Kwathi eseholidini kungase kubonakale kuwumqondo omuhle ukuthi uvuke ngesikhathi kuqhuma entathakusa futhi ugijime kuze phakathi kobusuku. Nokho, iqiniso wukuthi ukuthola ngokwanele yobuthongo okunomthelela kakhulu ukwedlula ungacabanga. Ebusuku, umzimba wethu kuthatha isikhathi rejuvenate ngisho ukuphulukisa. Isikhathi esingaphansi you chitha ukozela izindlela isikhathi esingaphansi uzokwazi ukuba zinakekele.
Empeleni, Ucwaningo luye lwabonisa ngisho ukuthi nalabo abangamkhonzi ngokwanele kungenteka uhlushwe nehlala njalo imiphumela emibi ezifana umfutho wegazi ophezulu kanye ukukhohlwa. Le miphumela kungenziwa kuphela wawuhlanganisa ngenkathi wokujikeleza, ngakho zisize umusa futhi uqiniseke ukuthi hit hay okungenani amahora ayisikhombisa ubusuku.
Ngenkathi kungaba nzima ukuthola i-zzz yakho uma uthuthile ezimbalwa izindawo zesikhathi futhi bahlushwa i-jet lag, ungasebenzisa izindlela eziningana ezahlukene ukusiza umzimba wakho ukhululeke futhi ukuzulazula off ubuthongo. Lezi zihlanganisa eshaweni efudumele noma ubhavu, spray lavender-olunephunga elimnandi, ukuzindla, ngisho inkomishi efudumele yetiye. Kafushane, kokuthola amaningi ukulala kubalulekile usizo ukuthi uhlale uphilile ngesikhathi wokujikeleza.
Amathikithi eMilseilles kuya eLyon esitimeleni samathikithi
Amathikithi eParis ukuya eLyon
Zigcine Unempilo Enhle Nakuba Okuhambayo Futhi Gwema Tap Water
Uma uya endaweni ethile ngempela engaziwa, kumelwe kube sobala ukuthi uzodinga ukugwema Emanzini kampompi. Kungani? Ngenxa yokuthi amagciwane ngaphakathi amanzi bendawo esifundeni eqondene, kanye / noma esiswini amagciwane akuzona nhlobo ukubhekana nabo. Izinkulungwane zabantu ngonyaka uthole ukuphuza ogulayo emanzini wendawo, ngemiphumela ezifana ukuhlanza, ukukhishwa yisisu evame kakhulu. Njengoba ithiphu, lunamathele amabhodlela amanzi noma kunini uma uku kude ozizwa ungakhululekile ukuwenza. Lokhu uya kabili izindawo nemikhuba inhlanzeko eyayivela. Amanye amazwe kancane athuthukile ungasebenzisa amanzi okuphuza oluvela emthonjeni ofanayo njengoba izindawo inkonzo yangasese. Yebo, lokho yinto!
Futhi, uqiniseke hydrate kahle. okushisa Zezıhlabane futhi lokuzivivinya ngamandla kukhona ithikithi okusheshayo esibhedlela ngaphandle ukuphuza amanzi ngokwanele.
Thola Shots Yakho
Kuye lapho oya, kungase kudingeke ukuba uthole isibhamu ezikhethekile emtholampilo travel noma ezinye isikhungo ukunakekelwa kwezempilo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kwamanye amazwe kancane athuthukile, engasasetshenziselwa izifo ezemidlalo ezifana umalaleveva ne-yellow fever. Ngaphambi amabombo out ohambweni lwakho, hlola Centers for Disease Control and Prevention (CDC) iwebhusayithi. Lapha ungakwazi ukuthola izidingo eziqondene nayo yezwe lapho uhambela. Uma ungenaso wase-United States, Ungahlola iwebhusayithi yakho yasendaweni, ezifana NHS, izidingo zakho ukuhamba enempilo.
Zigcine Unempilo Enhle: Musa Thinta Face yakho
Njengoba sike kakade wakhuluma izandla, manje sekuyisikhathi inkulumo mayelana ubuso bakho. Ngokuvamile uzobona abantu uhlezi ikhanda lazo ezandleni zabo, ukunwaya i ukuluma, noma ngenye indlela ngokuthinta ubuso babo. Kuyinto umkhuba ezinzima ukuphula kodwa ugcine izandla zakho kude ubuso bakho uma uzama ukuhlala ngenkathi wokujikeleza enempilo.
Kuyinto ingqondo, njengoba izandla zakho uthinte izinto eziningi kangaka usuku lonke. Kwi isitimela noma ibhanoyi, uzoba etafuleni ugqoko, the ngebhande lemoto. kanye nezinye izindawo ezihlukahlukene isikhala ezivamile ukuthi ethinta inhliziyo uku. Ngaphandle ngabe ukugeza izandla zakho ngaso sonke isikhathi uma uthinta into (noma kwenzeke ukuba ugqoke amagilavu), kuwumqondo kangcono ugcine izandla zakho ebusweni bakho ngaso sonke isikhathi.
Kunengqondo ukuthi ozodla kahle lapho siseholidini, kwesokudla? Ngemva kwakho konke, yini Spain ngaphandle ushokoledi kanye churros, futhi siyini France ngaphandle Baguette? Lena akuyona sisho, Nokho.
ukudla okumnandi konke kahle futhi omuhle, kodwa udinga ukuqinisekisa ukuthi ungumuntu ukudla okunempilo kanye. Landela mbhoshongo ukudla futhi ushintshe labo okukhona ejulile ethosiwe kwabanye imifino yonke once in a ngenkathi. Uma unaso isikhathi ke, ukuletha amavithamini kanye ukuba uzigcine yafakwa phezulu. Qiniseka ukuletha Vitamin c, probiotics, nezinye okulula kudle amavithamini.
Lokhu siyafaneleka kakhulu ukuphuza utshwala ngenkathi kuhanjwa kanye. Kuyaziwa kahle ukuthi ukuphuza utshwala ngokweqile kungaholela somzimba sokuzivikela ezifweni eyehlisiwe (futhi abanye hangovers ababi). Uma uzama ukugwema ukugula kokuthola, uqiniseke ukuthi ukugcina utshwala yakho ukusetshenziswa esiphansi. Ngemva kwakho konke, ofuna ukuvakashela uLisa Lisa onomkhuhlane ovamile?
Kugcine Zigcine Unempilo Enhle Ithiphu: Hlanza Area yakho
Kungase kube inkinga, kodwa sika kuwufanele ngokuletha ezinye usula magciwane kanye nawe noma kunini uma ukuhamba. Kungani? Ukuze kuhlanzwe zonke lezo amatafula ugqoko nezihlalo sesikubonile okukhulunywa. Clorox usula angathengwa ngobuningi bafakwa ziplock izikhwama. Ungabese uwalethe nawe ku sife yakho ku.
Qiniseka ukusula yokubeka, ephaketheni seatback (uma unayo), ngisho bopha ngebhande lemoto nge magciwane yakho ukuze usizo ukuqinisekisa ukuthi endaweni yakho ihlala ihlanzekile ngangokunokwenzeka.
Abantu bayagula ngenkathi kuhanjwa kaningi ngaphezu cishe yini enye. Ungabi njengawo wonke umuntu. Zinakekele nokusetshenziswa Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “7 Izindlela Zigcine Unempilo Enhle Nakuba Okuhambayo” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstay-healthy-while-traveling%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#safetravel europetravel enempilo trainjourney Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ukuhamba